November 2021 – Myanmar Update News
သူများတွေ ဂယက်ထနေချိန်မှာ တိုးတိုး တိပ်တိပ် လုပ်သွားတဲ့ အကယ်ဒမီနေတိုး
November 30, 2021News-Update0 Comments
တိုးတိုး တိပ်တိပ်လုပ်သွားတဲ့ အကယ်ဒမီနေတိုး သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ နေတိုး မင်္ဂလာလက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့ သတင်းများ ထွက်ရှိနေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ နေတိုး ကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံးရဲ့…
ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေကို ယွန်းယွန်းရှင်းပြီ
ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ . . . ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ .. ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ ….
ဖက်ရှင် ဘုရင်မ နေရာကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Rebecca
ဖက်ရှင် ဘုရင်မ နေရာကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Rebecca R&B သီချင်းများနဲ့ သီဆိုကျော်ကြား အောင်မြင်တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသူ ရေဗက္ကာဝင်း ကိုတော့ အားလုံး သိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။…
ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ (ရုပ်သံ)
ဖေဖဝါရီလ အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နေ့ကတည်းက ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ (ရုပ်သံ) အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နေ့ကတည်းက ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ- ချစ်သုဝေ သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့…
ယွန်းယွန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလတို့ နောက်ကြောင်းပါ အဖော်ခံရ
November 28, 2021News-Update0 Comments
ယွန်းယွန်းနဲ့စနှိုက်ကြော်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလတို့ နောက်ကြောင်းပါ အဖော်ခံရ ဒီကိစ္စလေးရော သိပီးကြပီလားဟင် မနေ့ညက အုပ်စိုးခန့်တင်တဲ့ My Day နဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော့်သား ဘုန်းမင်းနေလတင်တဲ့ My Day…
ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တောင်းပန်လာတဲ့ စည်သူဝင်း
သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေလူမှုကွန်ယက်မှာပလူပျံအောင် ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကိုအနူးအညွတ်တောင်းပန်လာတဲ့ စည်သူဝင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….MRTV4မှဇာတ်လမ်းတွဲများစွာကို သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ပါဝင်ရိုက်ကူးရင် ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ မင်းသားချောစည်သူဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ စည်သူဝင်းက လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ယွန်းယွန်းနဲ့တိတ်တ်ိတ်ပုန်းတွဲနေကြတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အရင်ချစ်သူကောင်းမလေးကိုတောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…
November 27, 2021News-Update0 Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရန် ရွေးချယ်ထားတဲ့ သူဟာ အခုချိန်မှာဆိုရင် အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို တော်လှန်နေကြတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလူငယ်တွေ ရောက်ရှိ စစ်ပညာသင်နေကြတဲ့ တောထဲမှာ သူလဲ ရောက်ရှိနေပြီး စစ်ပညာတွေ…
ဇနီးဖြစ်သူမှာ ၁၀နှစ်အတွင်းကို အခြားသောအမျိုးသားများနှင့် ၂၅ကြိမ်တိုင်တိုင် ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့သော်လည်း မေတ္တာမပြတ်ချစ်နေဆဲဖြစ်သော ခင်ပွန်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် ၄၀နှစ်အရွယ် အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ခင်ပွန်းနှင့် သားသမီး…
ရှားရှားပါးပါး ယောက္ခမနှင့် ချွေးမကြားက သံယောဇဉ် အဖြစ်ပျက် တရုတ်နိုင်ငံ Hubeiပြည်နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မင်္ဂလာပွဲရှိ ချွေးမနှင့် ယောက္ခမဖြစ်သူတို့ဧ။် ပုံရိပ်လေးသည် လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲကို ထိမိစေခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ချွေးမလေးသည်…